Mareykanka oo sheegay in duqeyn ku dileen 60 ka tirsanaa Al shabaab – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Arbaco, October, 17, 2018(HNN) Ciidamada Milatariga Maraykanka ee Afrika Africom ayaa sheegay in ay duqeyn ay ka geysteen deegaan ku dhow degmada Xaradheere ay ku dileen illaa lixdan ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab.
Duqeyntan oo dhacday Jimcihii aynu ka soo gudubnay ayaa qoraal ka soo baxay ciidamada Maraykanka ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in duqeyntan ay qeyb ka ahayd howlgalo wadajir ah oo ay wadeen ciidamo Maraykan ah iyo kuwo Soomaali ah.
Duqeyntan ayaa sida la sheegay waxa ay tahay tii ugu waxyeelada badneyd ee ay ciidamada Maraykanka ka geystaan dalka Soomaaliya tan iyo sanadkii November 2017 xilligaa oo Maraykanku sheegay in boqol dagaalamayaal Shabaab ah ay duqeyn ku dileen.
Warkan ka soo baxay ciidamada Maraykanka ee Africa ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeyntan aysan wax ku noqon dad rayid ah,hase yeeshee ma jiro ilo madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada Maraykanka.
Ururka Al-Shabaab ayaan sidoo kale ka hadlin duqeyntan la sheegay in lagu qaaday saldhig ay ku lahaayeen gobolada Dhexe ee dalka.
Tan iyo markii uu Madaxweyne Trump la wareegay madaxtinimada dalka Maraykanka ayaa waxaa kordhay weerarada duqeynta ah ee ay ciidamada Maraykanka la beegsanayaan fariisimaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin dalka Soomaaliya.
Mareykanka oo sheegay in duqeyn ku dileen 60 ka tirsanaa Al shabaab added by admin on 17/10/2018